Ukholifulawa Ofudumayo Nesaladi Lesanqante | Ukupheka Kwekhishi
Ukholifulawa ofudumele kanye nesaladi lesanqante
Ibinjani imikhosi kaKhisimusi? Yize ungakwazanga ukuwagubha ngendlela obungathanda ngayo, ngiyethemba ukuthi ukujabulele. Manje sekuyisikhathi, kancane kancane, sokubuyela kokujwayelekile; etafuleni lethu. Futhi lokhu ukholifulawa ofudumele nesaladi lesanqante kuyindlela enhle kakhulu yayo.
Ngemuva kwesidlo sasemini esiningi nokudla kwakusihlwa, abanye bethu bayakwazisa buyela ekulula usuku nosuku. Ngeke kukuthathe ngaphezu kwemizuzu engama-20 ukulungisa le recipe futhi ngiyaqiniseka ukuthi uzokwazi ukuthi ungayithokozela kanjani. Ungangeza izinongo ozithanda kakhulu bese uzigqokisa ngocwecwe lwamafutha omnqumo ayizintombi uma ufisa.
Isaladi linesisekelo se u-anyanisi othosiwe nopelepele esebenza njengomphelelisi wezithako eziyinhloko, ukholifulawa kanye nesanqante. Lezi ziphekwa kuqala bese ziyasuswa ukuze zithathe umbala omuhle wegolide. Akuphoqelekile kepha kubonakala kimi ukuthi ngaleyo ndlela wonke ama-flavour ahlanganiswe kangcono. Ngabe unesibindi sokukulungiselela? Uma ungeza ifayela le- inkomishi yelayisi ethosiwe noma i-tofu, uzofinyelela isidlo esiphelele kakhulu.
Le kholifulawa efudumele kanye nesaladi lesanqante lisibuyisela ekulula kwansuku zonke ngemuva kokudlulela kukaKhisimusi. Izame!
Ca ukholifulawa omkhulu
Sihlukanisa ama-florets ukholifulawa ukhiphe izaqathe.
Sibeka izinto zombili ku pheka ngebhodwe ngamanzi nosawoti. Ngemuva kwemizuzu eyi-10 sisusa ukholifulawa nemizuzu emihlanu kamuva noma lapho ukuthanda kwakho izaqathe.
Ngenkathi, susa u-anyanisi nopelepele oqoshiwe epanini ngezipuni ezimbili zamafutha omnqumo imizuzu engu-8.
Ngemuva kwemizuzu engu-8 engeza ama-florets okholifulawa nesanqante ibe yizicucu, inkathi bese ususa yonke imizuzu emihlanu.
Ngemuva kwalokho, sisusa emlilweni, ufafaza i-paprika eshisayo ukunambitha nokuxuba.
Fafaza isaladi efudumele yekholifulawa nge-drizzle yamafutha omnqumo e-virgin, uma ufisa, bese ukhonza.
Indlela ephelele ye-athikili: Inicio » Izitsha » Ungadliwa Kwemifino » Ukholifulawa ofudumele kanye nesaladi lesanqante